Imibono emihle yeVidiyo Ababhalisi bakho bakaYouTube baya kuyithanda engaphantsi kwemizuzu emi-2-YTpals
Ukuba ufuna ukubamba ingqalelo yabaphulaphuli bakho, iividiyo ezimfutshane zikaYouTube lolona khetho lulungileyo. Kufunyaniswe ukuba abantu babelana ngomxholo wevidiyo omfutshane ngokuphindwe kabini kunolunye uhlobo lomxholo. Xa siqwalasela iintlobo zomxholo wevidiyo kwiYouTube, zinokwahlulwa zibe ziindidi ezintathu eziphambili -
Ngelixa iividiyo zexesha elide zingcono ekunikezeni ulwazi olunzulu okanye izifundo, iividiyo ezimfutshane zingcono kukuzonwabisa. Unokubonelela ngomxholo we-capsule kwiividiyo ezimfutshane, ezijolise ukupakisha ulwazi oluninzi kwimizuzu embalwa. Ixabiso leevidiyo ezimfutshane zeYouTube lilele kwinto yokuba zibonelela abantu ngendlela elula nekhawulezayo yokufikelela kulwazi. Ngefomathi emfutshane, abadali bomxholo wevidiyo bafumana ithuba lokuyila iindlela zokuyila ezingakumbi zokunxibelelana ngolwazi olukhuthazayo noluchulumancisayo abantu.
Iingcebiso zokudala iividiyo ezimfutshane zikaYouTube ezibandakanyayo
Nazi iingcebiso ezimbalwa ezilula eziya kukunceda ekwenzeni umxholo wevidiyo omfutshane kuYouTube, oya kunceda ekukhuleni kwesitishi sakho. Iya kukufumana ngakumbi ababhalisile bakaYouTube.
1. I-Hook, iBali kunye neFomathi ye-CTA
Umbono olungileyo kukulandela ifomathi yehuku, ibali kunye neCTA / unikezelo. Oku kunokwenziwa ngokugcina ezi zinto zilandelayo engqondweni –
Qala ividiyo yakho nge hook. Ukuba kufuneka ubambe ingqalelo yabaphulaphuli bakho ngevidiyo yemizuzu emi-2, kufuneka wenze imizuzwana embalwa yokuqala ukubala. Kuya kufuneka uzame ukuqala nge hook, ukuze ababukeli bakho babandakanyeke kwasekuqaleni Ikhonkco kufuneka ibekwe ngokufanelekileyo kwimizuzwana emi-3-5 yokuqala yevidiyo. Ungasebenzisa kwakhona izihloko kunye nonyango olubonakalayo olunomdla ukubamba ingqalelo yabaphulaphuli.
Lichaze ngokucacileyo ibali. Xa ividiyo yakho ingaphantsi kwemizuzu emi-2 ubude, kubalulekile ukuba uhlale ugxile kumxholo ophambili womxholo wakho. Kuya kufuneka uyile ividiyo yakho ngendlela yokuba kubekho ukuthatyathwa okucacileyo kubaphulaphuli ekupheleni kwayo.
Phelisa ngobizo olunyanzelisayo lwesenzo. Ekupheleni kwevidiyo, chaza ngokucacileyo into ofuna bayenze. Nokuba yingxelo okanye ucela abaphulaphuli ukuba barhumele, ukuthanda okanye ukwabelana.
2. Bandakanya iNqanaba loMntu
Ungaqhuba uthethathethwano lweevidiyo ezimfutshane zeYouTube ngokubonisa ubuso bakho endaweni yokubandakanya umboniso wesitokhwe. Oku kwenza umxholo wakho uhluke ngakumbi, kwaye kuya kukuvumela ukuba uqhagamshelane nabaphulaphuli bakho kwinqanaba lomntu ngakumbi.
3. Qwalaselani ngeMixholo
Qhagamshelana nabaphulaphuli bakho kumajelo eendaba ezentlalo ukuze uze nezihloko ezibandakanyayo zomxholo wakho omfutshane. Unokufumana iimbono ezintle ngokuphinda uguqule umxholo wevidiyo endala okanye uthethe ngawo kwimbono entsha. Ekubeni uya kubonelela ngolwazi ngendlela yomxholo we-capsule, kufuneka uphando olunzulu kwaye lufutshane.
4. Sebenzisa Iimfutshane zikaYouTube
Unokusebenzisa iiShorts zikaYouTube ukwenza umxholo omncinci wetshaneli yakho. Eli nqaku livumela abadali bomxholo ukuba benze iividiyo ezimfutshane ze-15 ukuya kwi-60 yesibini. Esi sesinye sezongezo zamva nje kuYouTube zokuqhuba unxibelelwano nabasebenzisi. Ingangqina ukuba luncedo kakhulu ekufumaneni ababhalisile bakaYouTube.
5. Sebenzisa kangangoko unako
Kwiividiyo ezimfutshane zeYouTube, kuya kufuneka upakishe ulwazi oluninzi ngexesha elincinci. Kungenxa yoko le nto kufuneka usebenzise zonke izixhobo zakho, kubandakanya imizobo kunye nokwaleka okubhaliweyo ukunxibelelana ngombono wakho. Unako kwakhona ukushumeka imifanekiso kwividiyo yakho.
Ngala macebiso engqondweni, uya kuba nakho ukwenza iividiyo ezintle ngaphantsi kwemizuzu emi-2 ezingayi kuqhuba kuphela ukubandakanyeka komsebenzisi kodwa zikufumanele ababhalisile abatsha. Ungafumana kwakhona Ababhalisi bamahhala be-YouTube ukusuka ytpals.com. Sibonelela ngothotho lweenkonzo zikaYouTube eziya kunceda ijelo lakho ekufikeleleni ukuphakama okutsha. Ukufumana ngakumbi ungaqhagamshelana nathi namhlanje!
Imibono emihle yeVidiyo Ababhalisi bakho beYouTube baya kuyithanda engaphantsi kwemizuzu emi-2 ngababhali beYTpals, 11 Novemba 2021
Sebenzisa iYouTube ukukhuthaza iZiko lakho loKomelela
Indlela intengiso ku-YouTube enokulinceda ngayo iziko lakho lokomelela Inyaniso malunga nehlabathi esiphila kulo ngoku kukuba yonke into namhlanje ibaleka kwindawo yedijithali. Ukusuka ekuthengeni nasekuthengiseni nasekuzonwabiseni, yile…
Abantu abaninzi bacinga ukuba iindlela zokusebenzisa injini yokukhangela zinokusetyenziswa kuphela kumaphepha ewebhu. Nangona kunjalo, oko kukude nenyani, njengoko iindlela zokusebenzisa injini yokukhangela zinokuqeshwa nakweliphi na iqonga. Ii-hashtag...